ဝိုင်သခင်ထံမှ comments -, Ltd. Changyu ရှေ့ဆောင် International Co. ,
Fongyee Walker က, က MS:
ရိုးရှင်းသောသော်လည်း, Changyu Zenithwirl ကောင်းတစ်အရသာရှိပါတယ်။ ငါ Uncomplicated, တကယ်တော့, ထိုလုလင်အစပြုသူစားသုံးသူများအတွက်ယုံကြည်ပါတယ် N ကို fruity နှင့်သာယာသောဝိုင်ကောင်းသောဝိုင်ဖြစ်ကြသည်။
ဘရိုင်ယန် K. Julyan က MS, နိုင်ငံတကာ Sommelier အစည်းအရုံး၏ CEO ဖြစ်သူ:
Changyu Zenithwirl ရှုပ်ထွေးသည်မဟုတ်, ကျွန်တော်တို့ကိုနေ့တိုင်းသောက်ဘို့အတိအကျသင့်လျော်သည်။ Zenithwirl သောက်သုံးခြင်း၏ခံစားချက်, N ကိုအေးမြခြင်းနှင့်အရသာဖြစ်ပြီးစျေးနှုန်းကိုလည်းနေ့စဉ်သောက်သုံးသင့်လျော်သည်။
ရောဘတ် Tinlot, Institut အမျိုးသား des အယူခံ d'Origins (INAO) နှင့် OIV ၏ဂုဏ်ထူးဆောင်သမ္မတ၏ခဲ့သည် Rating ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒိုင်လူကြီး။ သူ 3rd Yantai နိုင်ငံတကာဝိုင် Exposition တက်ရောက်ခဲ့သည်သည့်အခါ Changyu ရှေ့ဆောင်ရညျးအိုး၏, တန်ဖိုးဖြတ်ခြောက်သွေ့သောအနီရောင်စပျစ်ရည်ကို
"ဒါကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီလက်ရာ! ဒါဟာနက်နဲပေါများအနံ့ရှိပြီး, ခမ်းနားခြင်းနှင့်ကြော့အဆောက်အဦများ။ ၎င်း၏ texture ကတ္တီပါကဲ့သို့ချောမွေ့ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်း၏နှစ်ပေါင်းအတူသာလျှင်ထိပ်တန်းအဆင့်အနီရောင်စပျစ်ရည်ကိုထိုကဲ့သို့သောအရသာရှိနိုင်ပါသည်။ "
သူက 2009 ခုနှစ်ပေကျင်း Chateau Changyu Afip ကို Global လည်ပတ်ခဲ့သည့်အခါ Yves Bénard, OIV ၏သမ္မတဟောင်းထွက်ထောက်ပြ:
"Afip အတွက်သွားရောက်ခြင်းနှင့်မြည်းစမ်းမှတဆင့်ကျနော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုပီတိအံ့အားသင့်ခြင်းနှင့်တုန်လှုပ်စေသည်ဖြစ်သောတရုတ်စပျစ်သီးစပျစ်ရည်ကိုအတွက်ကြီးစွာသောအလားအလာမြင်ကြပြီ Changyu Afip ။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Chateau အသစ်တစ်ခု benchmarking ကို set up ။ "
သူမက 2013 ခုနှစ် 7th Yantai နိုင်ငံတကာဝိုင် Exposition တက်ရောက်ခဲ့သည်သည့်အခါလော်ဒီယာInés Quini, OIV ၏ပစ္စုပ္ပန်သမ္မတလြောငျးအတွက် Chateau Changyu ရွှေရေခဲပြင်ဝိုင်ချိုင့်ထဲကနေရွှေစိန်အဆင့်ရေခဲစပျစ်ရည်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်:
"Changyu ရေခဲစပျစ်ရည်ကိုခြီးမှမျးအထူးသဖြင့်တန်ဖိုးရှိဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ရှားပါးစပျစ်သီးဖြစ်တယ် အံ့သြစရာအနံ့နှင့်အရသာအရသာနှင့်အတူစပျစ်ရည်ကို။ "
Federico Castellucci, OIV ၏အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးသူ 2013 ခုနှစ်တွင် 7th Yantai နိုင်ငံတကာဝိုင် Exposition တက်ရောက်ခဲ့သည်သည့်အခါ Ningxia Chateau Changyu တခု XV ၏ Cabernet Sauvignon တန်ဖိုးဖြတ်:
"100 ကိုမှတ်ဒီစပျစ်ရည်ကိုအကဲဖြတ်ဖို့အပြည့်အဝအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်လျှင်, ငါက 92 မှတ်ပေးမည်နီးပါးဖြစ်သော ခမ်းနား Slam တစ်ရမှတ်။ "
Jancis ရော်ဘင်ဆင်မဂ္ဂါဝပ်, ဝိုင်၏ကမ္ဘာ့ဖလား Map နှင့်ဝိုင်စပျစ်သီး၏စာရေးဆရာများ၏တဦးတည်း, စပျစ်ရည်ကိုဗြိတိသျှမာစတာစက်တင်ဘာလ 20, 2013 တွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည် Financial Times မှာမိမိကော်လံအတွက်တရုတ်အတွက်အကောင်းဆုံးဝိုင်အတွက် wrote:
"Changyu တစ်ချိန်ကရှန်ဒေါင်းရဲ့ရှေ့ဆောင်ခဲ့ စပျစ်ရည်ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ယခုပြုလုပ်လုံးဝစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် bellwether ဖြစ်၏။ "
သူက 2013 ခုနှစ်မှာ Changyu လည်ပတ်ခဲ့သည့်အခါဆရာယောဟနျဦး Salvi မဂ္ဂါဝပ်, ဗြိတိသျှဝိုင်နှင့်ဝိညာဉ်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌနှင့်စပျစ်ရည်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမာစတာထုတ်ဖော်ပြောဆို Count:
"ဘေဂျင်း Chateau Changyu Afip ၏ cabernet sauvignon ကို Global ညစာအဘို့သင့်လျော်သည်ဆိုပါက, ငါသည်အချို့ cabernet sauvignon ရှိသည်ဖို့ချင်ပါတယ် နေ့လယ်စာများအတွက် Ningxia Chateau Changyu တခု XV ။ "
Debra meiburg, က MS:
Chateau Changyu တခု XV Ningxia ၏စပျစ်ရည်ကိုအီတလီ truffles များ၏အနံ့ရှိပါတယ်။
သူက 2013 ခုနှစ်မှာ The Guardian သတင်းစာများ၏အင်တာဗျူးကိုလက်ခံလာသောအခါမာကု Pardoe မဂ္ဂါဝပ်, ဝယ်ယူရေးဒါရိုက်တာဗြိတိန်တော်ဝင် vintner BBR, ဗြိတိသျှအစိုးရ Lancaster House ရဲ့အိမ်အောက်ခန်းဝယ်ယူရေးအကြံပေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်စပျစ်ရည်မာစတာထွက်ထောက်ပြ:
"Changyu ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်နည်းပညာပေါင်းစပ်ဖို့ဘယ်လိုပြသ က "အဟောင်းလောက" နှင့် "ကမ္ဘာသစ်" မှစပျစ်ရည်ကိုထုတ်လုပ်သူများ '' ၏ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားစပျစ်ရည်ကိုဖန်တီးသကဲ့သို့။ "
Fiona Beckett, ဗြိတိသျှအစားအစာပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်, 2013 ခုနှစ်လြောငျးအတွက် Chateau Changyu ရွှေရေခဲပြင်ဝိုင်ချိုင့်ထဲကနေရွှေစိန်အဆင့်ကို 2009 ရေခဲစပျစ်ရည်ကိုလေ့လာပြီးမှစားနပ်ရိက္ခာ & ဝိုင်တစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေသည့်အပေါ်စပျစ်ရည်ကိုအရသာမှတ်စုထုတ်ဝေ:
"ဒီရေခဲစပျစ်ရည်ကိုအတော်လေးစျေးကြီးသည်မဟုတ်, ဒါဟာအလွန်ဖြစ်ပါသည် သံပုရာ၏မွှေးကြိုင်နှင့်အနည်းငယ်လိမ္မော်အရသာနှင့်အတူ, အရသာ။ ငါက ပို. ပင်ချစ်စရာကောင်းအပြာစိန်နှင့်ပိုပြီးစျေးကြီးဖြစ်ကြောင်းအနက်ရောင်စိန်များထက်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ "
Andreas Larsson, asi ၏ 12 ကမ္ဘာ့ဖလား Sommelier ပြိုင်ပွဲ၏ချန်ပီယံ, ဆှီဒငျဝိုင် Institute ၏ 2008 ပုံဆုကို Winner 2011 ခုနှစ်ပေကျင်း Chateau Changyu Afip ဂလိုဘယ်၏ 2002 Cabernet Sauvignon တန်ဖိုးဖြတ်:
"ကပင်မျက်စိကန်းအရသာ conference မှာနှိုင်းယှဉ်လျှင် Changyu Afip စိန်ခေါ်မှုမှအကြွင်းမဲ့အာဏာတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ် ဘော်ဒိုး Chateau ။ "
Hendrik သောမတ်စ်က MS, ဂျာမနီအတွက် Sommelier ၏မာစတာနှင့် NDR တီဗီများ၏ဝိုင်မဟာဗျူဟာအစီအစဉ်၏အိမ်ရှင်လြောငျးအတွက် Chateau Changyu ရွှေရေခဲပြင်ဝိုင်ချိုင့်ထဲကနေရွှေစိန်အဆင့်ရေခဲစပျစ်ရည်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်:
"၎င်း၏အရည်အသွေးကိုကငါ့ကိုအံ့သြနိုင်အောင်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအတိမ်အနက်ရှိတယ်။ နှင့်ဂျာမန်ရေခဲစပျစ်ရည်ကိုစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှု။ ငါစပျစ်ရည်ကိုလာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းထပ်မံကျယ်ဝန်းစျေးကွက်ရှိလိမ့်မည်ဟုသေချာပါတယ်။ "
သူဘီလ် Saporato အောက်တိုဘာလတွင်အမေရိကန်အချိန်တစ်သတင်းစာဆရာများ၏သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကိုလက်ခံသည့်အခါဝိုင်၏ကမ္ဘာ့ဖလားမြေပုံ, ဗြိတိန်စပျစ်ရည်ကိုအကဲဖြတ်လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သူ၏စာရေးဆရာများများထဲမှထုတ်ဖော်ပြောဆို Hugh Johnson သည် 2013
"Ningxia Chateau Changyu တခု XV ၏စပျစ်ရည်ကို လွယ်ကူစွာဘော်ဒိုးနဲ့ဆင်တူတဲ့စပျစ်ရည်ကိုအဖြစ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဤစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ဦးမြင့်တက်ကြီးသောတန်ခိုးဖြစ်၏။ "
စတီဗင် Spurrier, ပဲရစ်ဝိုင်-မျိုးစုံမြည်းစမ်းခြင်းနှင့်ဗြိတိန်နာမည်ကျော်စပျစ်ရည်ကိုဝေဖန်၏စတငျ 2011 ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားဝိုင် Outlook နဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ Changyu Cabernet တန်ဖိုးဖြတ်:
ရောဘတ်သည်ယောသပ်, ဗြိတိသျှမဂ္ဂဇင်းနိုင်ငံတကာဝိုင်, IWC ၏သမ္မတဟောင်းကိုတည်ထောင်သူ, 2013 ခုနှစ် Shaanxi Chateau Changyu Reina ၏ 2009 ခြောက်သွေ့သောအနီရောင်စပျစ်ရည်ကိုတန်ဖိုးဖြတ်:
"ဒီစပျစ်ရည်ကိုအပြည့်အဝ-body ဖြစ်ပြီး, ပျော့ပျောင်းသောဆိုးဆေးနှင့်အတူ BlackBerry, ချယ်ရီနှင့် vanilla ၏အရသာရှိပါတယ်။ ။ ဒါဟာမျှတတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အရှည်လျား aftertaste နှင့်အတူဖြစ်၏။ "
Thierry Desseauve, ပူးတွဲအယ်ဒီတာ-In-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ပြင်သစ်၏စပျစ်ရည်နှင့် Bettane + Desseauve, Yantai ၌သူ၏ခရီးစဉ်အတွင်း Changyu စပျစ်ရည်ကို 10 မျိုးကိုမြည်းစမ်းပြီးနောက်အကျဉ်းချုံးကာလွတ်လပ်သောစပျစ်ရည်ကို-မျိုးစုံမြည်းစမ်းအေဂျင်စီ, စပျစ်ရည်-မျိုးစုံမြည်းစမ်းအေဂျင်စီ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူမှ Bettane & Desseauve ရဲ့လမ်းညွှန်၏ 2013 ခုနှစ်တွင်:
အဟောင်းလောက "Changyu ၏စပျစ်ရည်သည်ခိုင်ခံ့ခံစားချက်ရှိပါတယ်" "။ ကြော့နှင့်စေ့စပ်သောကွဲပြားခြားနားသောစပျစ်ရည်, ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်တူစပျစ်ရည်ကို-ချမှတ်ခြင်းအတွေးအခေါ်မျှဝေပါ။ "
သူသည် 2012 ခုနှစ် Yantai လည်ပတ်ခဲ့သည့်အခါဂျော်နသန် Ray, ကျော်ကြားသောဗြိတိန်စပျစ်ရည်ကိုဝေဖန်, ဝိုင်နဲ့ကဘယ်လိုဝိုင်နှင့်အခြားစာအုပ်များဝယ်ရန်ငှါ၎င်း, Daily Telegraph သတင်းစာရဲ့၏စပျစ်ရည်ကိုပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်အကြောင်းကိုအားလုံး၏စာရေးဆရာ, ထောက်ပြ:
"Changyu Cabernet ပြီးသားရငျ့ကကျြအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပြီး, သူက တရုတ်စပျစ်ရည်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါတယ်။ "
: ဒေါက်တာဂျေမီကောင်းသော, 2012 နှစ်ပတ်လည်ပုံ Award ဆု & အကောင်းဆုံးဘလော့ဂါ IWSC ၏, နှင့် www.wineanorak.com ထုတ်ဝေစပျစ်ရည်ကိုအရသာမှတ်စု 2012 ခုနှစ်တွင် Changyu Cabernet လေ့လာပြီးမှတည်ထောင်သူ
ဆွဲဆောင်မှု "Loire ချိုင့်ထဲကနေဝိုင်နဲ့တူအဆိုပါချစ်စရာကောင်းတဲ့အနံ့အရသာ, ပျော့ပျောင်းအရသာနှင့်အတူ, ချယ်ရီသီးအပွခြင်းနှင့်အစိမ်းရောင် leafy ၏အနံ့။ ဒါဟာတောက်ပ texture နှင့်အလယ်အလတ်ခန္ဓာကိုယ် featuring, ချိုမြိန်မွှေးနှင့်အလွန်ချောမွေ့အရသာရှိတယ်။ "
IWSC ထုတ်ဝေစပျစ်ရည်ကိုအရသာ၏ 2012 ခုနှစ်နှစ်ပတ်လည်ပုံ Award ဆု & အကောင်းဆုံးဘလော့ဂါနှင့်အတူဒေါက်တာဟိုဆေး Vouillamoz, www.wineanorak.com တစ်ဦးကိုတည်ထောင်သူ, 2012 ခုနှစ် Changyu Cabernet လေ့လာပြီးမှမှတ်ချက်ပြု:
"Loire ချိုင့်ထဲကနေဝိုင်နဲ့တူအဆိုပါချစ်စရာကောင်းတဲ့အနံ့အရသာ, ပျော့ပျောင်းအရသာနှင့်အတူ, ချယ်ရီသီးဆွဲဆောင်မှုအနံ့နှင့်အစိမ်းရောင် leafy ။ ဒါဟာတောက်ပ texture နှင့်အလယ်အလတ်ခန္ဓာကိုယ် featuring, ချိုမြိန်မွှေးနှင့်အလွန်ချောမွေ့အရသာရှိတယ်။ "
Huang က Yali, က Les Amis d'Escoffier Society ၏ဂုဏ်ထူးဆောင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဟောင်ကောင် Sommelier အသင်းဂုဏ်ထူးဆောင်အကြံပေး 1912 Pinzhongliquan Changyu ရှေ့ဆောင်အိမ်အောက်ခန်းတန်ဖိုးဖြတ်:
"Changyu ရှေ့ဆောင်အိမ်အောက်ခန်းကနေခြောက်သွေ့တဲ့အနီရောင်စပျစ်ရည်ကိုတရုတ်စပျစ်ရည်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးအဖြစ်သုံးနိုင်တယ် ။ ၎င်း၏အရောင်, အနံ့နှင့်အရသာအပေါင်းတို့, ကအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုရှိကြောင်းပြနှင့် 15 နှစ်ကြာပိုကောင်းမြည်းစမ်းလိမ့်မည်။ "
"ဒါဟာ fruity အနံ့, ကောင်းသောသပိတ်ပင်အရသာရှိပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းသောကြာရှည်ခံမှုနှင့်ခိုင်မာသော vanilla အရသာကြွယ်ဝသောသူ, ပျော့ပျောင်းသောအရသာရှိပြီး, ထိုသို့ပြင်သစ်ကော့ညက်၏တူညီသောတစ်နှစ်နှင့်အတူအဆင်သင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်တယ်။ "
"Coyam ထုတ်ကုန်များ၏လက်ရှိအဆင့်ကိုကော့ညက်အများအပြားထုတ်လုပ်သူထက် ပို. ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပေါင်းခံဖြစ်စဉ်ကိုများအတွက် Coyam အဖွဲ့အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ကနေအသေးစိတ်သုတေသနပြု, နှင့်သုတေသနအားလုံးအသေးစိတ်တည်ဆဲ Coyam အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်နိုင်သမျှပါစေ။ "
Changyu AFIP အပူပိုင်းနီဝိုင် (Superior ဝိုင်) မြည်းစမ်းပြီးနောက်, ဖရန့် Kammer 2009 ခုနှစ် Changyu AFIP အပူပိုင်းနီဝိုင် (ပရီမီယံဝိုင်) ရင့်ကျက် morello, BlackBerry ယိုနှင့် blackcurrant ၏အနံ့နှင့်အတူ "Napa" ၏စတိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောသည်။ အဆိုပါ velvety နူးညံ့သိမ်မွေ့ဆိုးဆေးနောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အကောင်းတစ်ဦးအလားအလာနှင့်အတူတစ်သဟဇာတခံစားမှုဖန်တီးခဲ့သည်။ 2010 ခုနှစ် Changyu AFIP အပူပိုင်းနီဝိုင် (ပရီမီယံဝိုင်) တစ်ခုအံ့သြဖွယ်အရသာထွက်ခွာ, ကြော့နဲ့ရင့်ကျက်အနံ့မှောင်မိုက်ဇီးသီးနှင့် blackcurrant ၏ fruity အရသာနှင့်အတူရောနှောနှင့်အတူ "ဘော်ဒိုး" ၏စတိုင်လ်ပြသခဲ့သည်။
Changyu တခု IV အပူပိုင်းနီဝိုင်မျိုးစုံမြည်းစမ်းပြီးနောက်, ဖရန့် Kammer ကပြောသည် 2008 ခုနှစ် Changyu တခု IV အပူပိုင်းနီဝိုင်ထိုကဲ့သို့သောရိုင်းဇီးသီးနှင့် cranberry အဖြစ်သစ်တောသီး၏အနံ့နှင့်အတူရှုပ်ထွေးပြီးအရသာခဲ့တာ, အနီရောင်အသီးများနှင့်အခြောက်အဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးပညာစောင့်မတော်မူ၏။ ဒါဟာငြိမ်းချမ်းစွာအဖြစ်သောမြို့ရိုး vivacious နှင့်မျှမျှတတကြီးထက်သာလွန်ဆိုးဆေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်သာယာသောနှင့်လတ်ဆတ်သော aftertaste နှင့်အတူအရသာအတွက်ယှဉ်ပြိုင်။ ဤသည်စပျစ်ရည်ကိုမည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုထူးခြားသောဖြစ်ခဲ့သည်။
နှင်းဆီ Murray ဘရောင်းမဂ္ဂါဝပ်: Changyu Noble နဂါးထည်-အပြည့်အဝနဲ့လတ်ဆတ်တဲ့အနက်ရောင်အသီးအနံ့ရှိပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဘော်ဒိုး၏အနီရောင်စပျစ်ရည်ကိုစဉ်းစားလုပ်ပေမယ့်ဒါဟာထက်ပိုပါတယ်။ ကနှုတ်၌ဖြစ်တဲ့အခါ, သူမအာရဇ်ပင်အရသာရင့်ကျက်သေးငယ်တဲ့သပိတ်ကနေလာဟန်ထားတဲ့အတွက်ရင့်ကျက်ခြင်းနှင့်အပြည့်အဝ-body အသီးအနံ့, ခံစားမိနိုငျသညျ, အလယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏အရသာကိုလွင်ပြင်အစိမ်းရောင်အရွက်များဖြစ်ပြီး, aftertaste ဒဏ်ငွေနှင့်ပြည့်ဝ၏ နှင့်တပြင်လုံးကိုစပျစ်ရည်ကိုအောင်ဆိုးဆေးအရသာ, အားကြီးသော Yantai အတွက်နောက်ဆုံးအချိန် Chateau Changyu သွားရောက်လည်ပတ် structure.When ၏ခံစားချက်ရှိသည်, ဒီစပျစ်ရည်ကို၏ထူးခြားသောအရက်သောက်ခံစားမှုမျှော်လင့်ကျော်လွန်ခဲ့နှင့် superexcellent အရည်အသွေးကိုသူမ၏အပေါ်နက်ရှိုင်းသောအထင်အမြင်ထားခဲ့တယ်။ ခြော, N ကိုမြည်းစမ်းလုံးဝကျိုးနပ်သည်။
"ဒါဟာတကသန့်ရှင်းတဲ့နှင့်ခါးသောအရသာအရသာ Limousin elecampane ရှိပါတယ်။ သပိတ်ပင်များ၏အနံ့ကအရမ်းအဆင်ပြေပါတယ်။ လှပသောအရောင်ဖြစ်သောအနီရောင်အနည်းငယ်မီးနှင့်အညိုရောင်, အရသာ, ဗာဒံသီးမက်မွန်ယိုနှင့်သိသာပန်းပွင့်အနံ့ထ။ ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အလွန် အဆင်ပြေ။ ဒါဟာတရုတ်စျေးကွက်အတွက်သာမန်ကော့ညက် XO ထက်ပိုရှည်သမိုင်းရှိပါတယ်, နှင့်အပိုအဆင့်ဆင့် (25-30 နှစ်) ကပိုင်ဆိုင်သည်။ " --By ရောဘတ် Leaute, ကျော်ကြားတဲ့ပြင်သစ်ကော့ညက်အရသာ assayer နှင့်လက်ရှိပြင်သစ် LEC ကော့ညက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စမ်းသပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဓာတ်ခွဲခန်းဆောင်မှု။ )
Jeannie ချို Lee ကမီဂါဝပ်, Chateau Changyu တခု XV ၏ 2008 Cabernet Sauvignon လေ့လာပြီးမှ 2013 ခုနှစ်အတွင်းမျိုးစုံမြည်းစမ်းမှတ်စုထုတ်ဝေခဲ့သည် "အာရှအာခေါင်" ၏စာအုပ်နှင့်အတူမဂ္ဂါဝပ်စပျစ်ရည်ကိုအရည်အချင်းများနှင့်စပျစ်ရည်မာစတာရယူပထမဦးဆုံးအာရှ:
"တရုတ်အများစုက cabernet sauvignon နှင့် merlot blending ကနေအမျိုးမျိုး အနီရောင်စပျစ်ရည်ကို, ဒီစပျစ်ရည်ကိုအဆင်းလှသောအရသာရှိပါတယ်။ ဒါဟာ BlackBerry နှင့်ချယ်ရီ၏အားကြီးသောအနံ့နှင့်အတူ, နက်ရှိုင်းသောအနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Solid ဆိုးဆေးသာ 12.5% ၏အရက်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအောက်မှာထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဒါဟာကတ္တီပါကဲ့သို့အအရသာရှိတယ်။ ဆော့ဖဆိုးဆေးနှင့်ပိတ်ပင်၏အရသာအိုမင်းကြောင်းညွှန်ပြ နည်းပညာအမြော်အမြင်ရှိရှိနဲ့အမှုဆောင်အသုံးပြုသည်။ "
နေရပ်လိပ်စာ: မရှိပါ။ 56 Dama လမ်းမကြီး Zhifo Yantai ရှန်ဒေါင်း, တရုတ်
E-mail ကို: liangxiaohui@changyu.com.cn
© Copyright - 2019-2022: အားလုံးအခွင့်အရေး။